Wednesday October 11, 2017 - 11:09:00 in Maqaallo by Shaqaalaha Burcoonline News
Maqaalkan waxaynu ku soo qaadan doonaa sidii aynu uga dhigi lahayn falanqaynta aynu falanqayno mawduucyada kala duwan ,ha ahaadaan kuwa ku saabsan Siyaasada
Maqaalkan waxaynu ku soo qaadan doonaa sidii aynu uga dhigi lahayn falanqaynta aynu falanqayno mawduucyada kala duwan ,ha ahaadaan kuwa ku saabsan Siyaasada Dalka sida waxbarashada ,dhaqaalaha , IWM. Waayo falanqaynta arrimaha dalku waa waxa inta badan bar-kulanka blushda lagaga hadlo.
Mawduucyada iyo hadalada lagu falanqeeyo goobahaas sidii looga dhigi lahaa qaar ku salaysan xog, aragti , khibrad , iyo fikrado , una noqon lahaayeen qaar is-fahan iyo ixtiraam ku jiro , kana soo baxaan fikrado kala duwan iyo aragtiyo midaysan oo ay ku ladhan yihiin xoog dhammaystirani ; waa mawduuca maqaalkan.
Marka aynu doonayno inaynu mawduuc ku falanqayno goob ama bar- kulan waa in aynu afar shay ku salaynaa falanqaynteena:
diyaarsado xogtii uu u baahnaa , una diyaariyo si cilmiyaysan , uu baadhana wakhti ku filan. Xogtaas oo uu ka heli karo meelo kala duwan sida buug, internet , maqaal ,IWM. Balse haddii uu qofkaasi isaga oo aan xog haynin uu doono inuu mawduuc ka hadlo waxa dhici doona inay meesha timaado is-fahan la,aan iyo muran midho-dhalays ah.
Waxayna faaidadu dadka la fadhiyaa u badan tahay marka uu mawduucu yahay mid guud sida mid ah :
Tusaale kale ,waxa isna goobta fadhiyi kara qof ay saaxiibo yihiin qof khibrad u leh arrintan laga hadlayo. Isaguna waxa uu soo bandhigayaa talooyinkii iyo khibradii saaxiibkii si looga baxo dhibaatooyinkan dhaqaale , waxayna aqoon iyo talooyin u noqon karta dadka goobtan fadhiya.
Fikrad. Marka mawduuc laga hadlayo ama waxa laga qorayo waa in la soo bandhigo fikrado kala duwan , fikradahaas oo la filayo inay xal u noqon doonaan sidii loo horumarin lahaa mawduucan ama loo yarayn lahaa dhibta ku jirta mawduucan la falanqaynayay.
Waxa sidoo kale inala fadhiyi kara bar-kulankan dad aan wax aqoon iyo khibrad u lahayn mawduucan aynu ka hadlayno.Laakinse waxa fiican in iyagana la dhagaysto rayigooda laba sababood awgeed.
is-weydaarsan doono xog , fikrado , iyo khibrado kala duwan.
Sidaa darteed marka uu qofkasta oo bar-kulankan fadhiyaa uu xogtiisa uu hayay , fikirkiisa, iyo khibradiisaba ka dhiibto mawduucan laga hadlayo, waa in qofkasta oo goobtaas fadhiyaana uu isna fal-celin ka bixiyo fikrada, xogta ama khibrada uu saaxiibkood la wadaagay.
Kala soco maqaalkan iyo maqaalo kaleba Websiteyada afka Soomaaliga ku baxa iyo degelkan: